Lighting Design/ Electrical Engineer | Power Light Co.,Ltd ﻿
14.3.2019, Full time , Electronics / Electrical Equipment
•	B.E(E.P) Electrical Power,E.E အဖြစ်နှင့် Installation & Lighting Plan များလုပ်ကိုင်ဖူးသောလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(3)နှစ်မှ(5)နှစ်ရှိရမည်။ (လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမရှိသူများလျှောက်ထားရန်မလို)
•	Master of Engineer(EP) နှင့်ကျောင်းပြီး၊ Lighting Design စိတ်ဝင်စားသူ
•	Project များအတွက် Electrical Drawing / plan ပေါ်အခြေခံ၍မီးပစ္စည်းများရွေးချယ်ပေးခြင်း၊ Light Point calculation,Power Point, load calculation, single line diagram များကိုယ်တိုင်စ/ဆုံးဆွဲနိုင်ရမည်။
•	Product နှင့် Lighting Design အတွက် Training ပေးမည်။
Work location No.7, WAI ZA YAN TAR Road, Thingangyun Township. (Near Triton Restaurant and Bar). Yangon. Myanmar.
Job Function: Lighting Design/ Electrical Engineer
17 Days, Full time , Electronics / Electrical Equipment
•	Chief Accountant အတွက်ကူညီရေးဆွဲပေးသောအတွေ့အကြုံရှိကဦးစားပေးမည်။
Lighting Design & Chief Electrical Engineer
•	Lighting Plan များကိုကိုယ်တိုင်ဆွဲနိုင်ရမည်။ •	Project များအတွက်Electrical Drawing / plan ပေါ်အခြေခံ၍မီးပစ္စည်းများရွေးချယ်ပေးခြင်း၊ Light Point calculation,Power Point, load calculation, single line diagram များကိုယ်တိုင်စ/ဆုံးဆွဲနိုင်ရမည်။ •	Product နှင့်Lighting Design အတွက်Training ပေးမ ...
•	Lighting Products ပစ္စည်းများအား Tender နှင့် Project များအတွက်Sales plan နှင့်Target များရေးဆွဲအကောင်ထည်ဖော်ပြီး Project Sales & Marketing Department အားကောင်းစွာ အုပ်ချုပ်၍ Target ပြည့်မှီအောင်Management လုပ်နိုင်ရမည်။
•	Project များအတွက်Electrical Drawing / plan ပေါ်အခြေခံ၍မီးပစ္စည်းများရွေးချယ်ပေးခြင်း၊ Light Point calculation,Power Point, load calculation, single line diagram များကိုယ်တိုင်စ/ဆုံးဆွဲနိုင်ရမည်။ •	Product နှင့်Lighting Design အတွက်Training ပေးမည်။ Lighting Design/ Chief Electrical Engineer
•	Strategic Purchase: item analysis, planning, sorting, Total cost consideration ကျွမ်းကျင်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။ •	Purchase Request/ Purchase Order System data input -Meeting minutes, Report preparation and etc.
•	Lighting Plan များကိုကိုယ်တိုင်ဆွဲနိုင်ရမည်။ •	Project များအတွက်Electrical Drawing / plan ပေါ်အခြေခံ၍မီးပစ္စည်းများရွေးချယ်ပေးခြင်း၊ Light Point calculation,Power Point, load calculation, single line diagram များကိုယ်တိုင်စ/ဆုံးဆွဲနိုင်ရမည်။ •	Product နှင့်Lighting Design အတွက်Training ပေးမ� ...
Project Sales & Marketing /Sales Engineer
101 Days, Full time , Electronics / Electrical Equipment
Lighting Design/ Electrical Engineer Electrical Engineering jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon Power Light Co.,Ltd Electrical Engineering Jobs Electrical Engineering Jobs Lighting Design/ Electrical Engineer Jobs in Myanmar, jobs in Yangon